Amin'ny fanaovan-tsoa sy fanampiana ny hafa
Izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy» - Asa. 10:38.
Marobe tokoa ny fahagagana nataon'i Kristy fony lzy tety an-tany. Nasehony tamin'izany asa izany ny zavatra azon'Andriamanitra atao ho an'ny vatana sy ny saina azom-pahoriana (...) Niasa mandrakariva ho an'ny hafa Izy, ary nanararaotra ny tombontsoa rehetra nahazoany nanao izany. Eny fa na dia fony zaza aza Izy dia efa nanonona teny fampaherezana sy feno halemem-panahy ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe (...) Asehon'ny ohatra navelany fa afaka ny ho tonga tahaka Azy ny ankizy rehetra mila miezaka hanao izany (..) Hita taratra teo amin'ny teniny sy ny asany ny fangoraham-po feno fitiavana ho an'ny rehetra. Balsama manasitrana sy mampitony ny kivy sy ny malahelo ny firaisam-pony. — YI, 08 Septambra 1898.
Nanana faharetana tsy azon'inona na inona harodana Izy ary fahatokiana tsy azo nohozongozonina. Vonona mandrakariva hanompo ny hafa sy hanamaivana ny enta-mavesatry ny ray aman-dreniny ireo tanany sy tongony feno fahavitrihana. — YI, 01 Aprily 1872.
Mitandrema fatratra mba hanaraka ny ohatr'i Jesôsy. Tahaka ny tanamasoandro mampifanandrify mandrakariva ny voniny amin'ny masoandro, dia aoka koa ny fonareo sy ny sainareo hitodika mandrakariva any amin'i Jesôsy, Masoandron'ny Fahamarinana. Aza mifantoka be loatra amin'ny "izaho" na nanao ho lohalaharana ny fahafinaretanao sy ny fanirianao. Tadiavo izay hahasoa ny hafa; saintsaino ny ho tonga fitahiana ho azy ireo sy ny hanome voninahitra ny Mpanao anao. — YI, 14 May 1884.
Miakatra avy amin'ny manodidina antsika rehetra ny tolokon'izao tontolo izao mandalo fitsapana. Hita ombieny ombieny ny malahelo sy ny olona zohim-pahoriana. Amintsika no mitambesatra ny adidy hanamaivana sy hanalefaka ny fahoriana sy ny fahantram-piainana. Ny fitiavan'i Kristy irery ihany no afaka hanome izay ilain'ny fanahy. Raha mitoetra ao anatintsika Jesôsy, dia ho feno mitafotafo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fontsika. Hiboiboika noho ny fitiavana mitovy amin'izay ananan'ny Mpamonjy ireo loharanom-pahazotoana miredareda.
Endrey ny hamaroan'ireo olona very fanantenana tanteraka! Andeha haverintsika ao am-pon'izy ireny ny masoandro. Firifiry koa moa no azon'ny fahakiviana! (...) Andeha hoentintsika eo amin'i Jesôsy ireny fanahy azon'ny manjo ireny, ary holazaina aminy fa misy balsama sy dokotera any Gileada. — MM, t. 585.